Iflethi okanye indlu ekwicomplex uDarge, (Schmallenberg), Fewodarge, 57sqm, 1 Igumbi lokulala, ubuninzi. 4 Abantu - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex uDarge, (Schmallenberg), Fewodarge, 57sqm, 1 Igumbi lokulala, ubuninzi. 4 Abantu
Ngabantu abambalwa, abayi-57sqm, igumbi lokulala eliyi-1, elona nani likhulu labantu abayi-4
Wamkelekile kwiflethi yethu eyi-57sqm. Ungena kwiflethi yethu kwindawo yakho yokungena. Kwipaseji encinci enamagumbi okulala, ungena kwigumbi elikhulu lokuhlala-kwicango lasekunene. Ikhitshi elinento yonke liquka indawo yokutyela enezitulo eziyi-2 (mhlawumbi eziyi-4). Kwigumbi lokuhlala, kukho isofa ekwayibhedi (160x200) enodonga oluhlalayo kunye neTV. Ukusuka kwipaseji ukuya kumnyango osekhohlo, ufika kwigumbi lokuhlambela uneshawa, indlu yangasese nesinki. Ukusuka apho, umnyango uya kwigumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini (200x200) nendawo yokuhlala encinci. Igumbi lokulala kunye nekhitshi zixhotyiswe ngee-blinds zombane kunye neskrini sokubhabha. Igumbi lokuhlambela lineefestile eziyi-2 ezineenetha zeengcongconi. Le flethi yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2020/2021 yaza yaxhotyiswa ngendlela entsha yale mihla. Okunye: Izinto zebhedi zifakwa kumntu ngamnye itawuli yokuhlamba eyi-1/itawuli eyi-1. I-WiFi yasimahla.
Siyakwamkela kwiflethi yethu entsha yeholide. Ngaphandle kwedolophana yethu encinci yaseSchmallenberg Felbecke, iflethi yethu esandul 'ukwakhiwa ifumaneka ngqo kumadlelo nakumadlelo. Ilungele ukufumana uxolo kunye nokukhululeka. Sikhangele phambili ukuba nawe.
Intsapho yakho uDarge
Izimvo eziyi-1 440